Vaovao - Mora azo ve ny vy korten?
Corten vy na Weathering vy dia karazana manokana andiana vy firaka ambany eo anelanelan'ny vy tsy misy fangarony sy ny vy karbonina tsotra. Izy io dia manana fanoherana ny harafesin'ny atmosfera sy ny firakotra noho ny vy karbaona tsotra, ary ara-toekarena kokoa ny vidiny noho ny vy vy.
Ny takelaka vy corten dia iray amin'ny takelaka vy, ka izany no mora azo. Raha ara-dalàna ny fitaovana vy korten dia azo atao endrika telo-refy, toy ny toradroa, telozoro, mahitsizoro, boribory lavalava sns. Ity endrika ity dia afaka mampiseho ny endrik'ilay sary sokitra Corten amin'ny tsara kokoa ary afaka manamboatra endrika izahay raha vao manamafy anay ny idesanao ianao.
Ireo sary sokitra matevina ity dia azo tazonina mandritra ny zato taona. Ny antony lehibe dia aorian'ny fisarahana amin'ny tontolo ivelany ivelan'ny voajanahary, ny velon'ny vy dia manangana ho azy ny rindrina miaro anti-corrosion rehefa mifandray amin'ny rano na ranonorana. Safidy tsara ny handravaka ny toerana ivelany, sa tsy izany?
Nanamboatra tetik'asa ivelany izahay ho an'ny mpanjifa any ivelany taloha ary mampiasa ny vy corten ho fitaovana lehibe indrindra. Mandritra izany fotoana izany dia nanamboatra zavakanto metaly tena tsara ho an'ny mpanao sary sokitra eto an-toerana izahay na mpamorona, izay iray mpanakanto malaza any Sina. Ny sary sokitra vita tànana dia malaza be eto an-trano sy any ivelany.
Rehetra ao amin'ny orinasa misy antsika dia afaka manohana OEM sy ODM amin'ny karazana sary sokitra. Manana ekipa mpamorona tsara izahay hamaly ny takinao. Izahay dia fanamboarana mivantana amin'ny sehatry ny fanaovana sary sokitra ary tsy misy lehilahy afovoany. Ka azonay atao ny manolotra anao ny vidin'ny fifaninanana sy ny antonony foana.
Adiresin'ny birao: ROOM 1407, CHANGAN BLDG, NO.75-77 LVLING ROAD, HULI DISTRICT, XIAMEN, 361009, FUJIAN, CHINA
Telefaona mivantana: + 86-592-5970572
Fotoana fandefasana: Jul-05-2020